Bazovela enkantolo ababoshwe ngesigameko saseMoses Mabhida Stadium | News24
Bazovela enkantolo ababoshwe ngesigameko saseMoses Mabhida Stadium
Johannesburg - Abesilisa ababili ababhekene necala lodlame emphakathini kanye nelokucekela phansi impahla kulandela isigameko esenzeke eMoses Mabhida Stadium bazovela eNkantolo kaMantshi eThekwini ngoMsombuluko.
IMoses Mabhida iphenduke inkundla yodlame ngoMgqibelo ebusuku ngesikhathi abalandeli bengena enkundleni kulandela ukwehlulwa kweKaizer Chiefs ngo-2-0 idlala neFree State Stars kowandulela owamanqamu eNedbank Cup.
Amaphoyisa asebenzise isisi esikhalisayo kanye nama-stun grenade ukuzama ukulawula abalandeli ebebephula izihlalo beshaya nonogada.
I-video iveza abalandeli beshaya kabi nomunye wonogada, bamshiya kungathi uqulekile.
OLUNYE UDABA: Usesimeni esethembisayo unogada oshaywe kabi eMoses Mabhida Stadium
"Unogada oyedwa ungeniswe esibhedlela kodwa asinaso isiqiniseko ngesimo akusona,” kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala.
Okhulumela iCrisis Medical uKyle van Reenen utshele iNews24 ngeSonto ukuthi unogada usesimeni esibucayi kodwa esethembisayo.
Abaphathi benkundla ngeSonto badalule ukuthi unogada olimele akuyena owesifazane, yindoda. Akekho umuntu wesifazane olimele kulesi sigameko.